Olu Akwa Ihe olu a di ezigbo ngbanwe ma mere ya site na iberibe ahiri emegheri na nkenke onu ya. Okooko osisi nke dị n'etiti akụkụ aka nri na-atụgharị ma enwere ikike iji iji mkpụmkpụ mkpụmkpụ nke olu ahụ dị ka ibe ụzọ Akara olu dị ezigbo ọkụ nyere ọdịdị 3D na ịdị mgbagwoju anya. Nnukwu oke maka ya bụ gram 362.50 ka emere karat dị 18, yana okwute 518.75 nke okwute na diamọnd
Silk Foulard "Passion" bụ otu n'ime ihe "Nche". Jiri nwayọ tinye akwa silk ahụ n’akụkụ n’akpa uwe ma ọ bụ jiri ya mere ihe osise ma mee ka ọ dị ogologo ndụ gị niile. Ọ dị ka egwuregwu - ihe ọ bụla nwere ihe karịrị otu ọrụ. Mmezi aka dị n’agbata omenkà ochie na ihe ndị eji achọ ihe ọgbara ọhụrụ. Ihe osise ọ bụla bụ nka pụrụ iche, na-akọkwa akụkọ dị iche. Cheedị echiche ebe obere nkọwa zuru ezu na-akọ akụkọ, ebe ịdị mma bụ uru ndụ, yana okomoko kacha mma bụ ikwenye onwe gị. N’ebe a ka “Ekele” zutere Gi. Kwe ka nka zute gi ma kaa nká!
Nchịkọta Ọla Dị Iche Iche
Nchịkọta Ọla Dị Iche Iche Ọdịnihu dị na ngoija 02 bụ ihe ndị a na-achọta mma bụ nke na-atọ ụtọ ma na-emegharị emegharị nke sitere na usoro mmụọ. Ejiri sọftụwia a na-eji kọmpụta a na-eme kọmpụta nke ọ bụla, nke etinyere kpam kpam ma ọ bụ nke ọzọ na Selecter Laser Sintering ma ọ bụ Iron 3D teknụzụ e ji ebi akwụkwọ wee mepụta usoro iji mepụta ọla. Nchịkọta ahụ na-adọta mmụọ site n'ụdị nke okirikiri ma jiri nlezianya dozie anya iji hụ ka Euclidean theorems na usoro nke ụdị ihe osise, na-egosipụta, n'ụzọ dị otu a mmalite ọhụrụ; mmalite nke ọdịnihu ga-atọ ụtọ.
Uwe Elu Trenchi
Uwe Elu Trenchi Lovehụnanya na ịba ụba. Ọmarịcha akụkọ e dere n’elu akwa ahụ, na-adakọrịrị echiche na echiche nke tren’coat, yana uwe ndị ọzọ niile nke nnakọta. Iche iche nke mpempe a doro anya na imewe obodo, mmetụ dị ntakịrị, mana ihe bụ ihe ịtụnanya n'ezie, ọ ga - abụ ya ịmatakwu. Naanị mechie anya gị, biko. Nke mbu, ikwesiri ihu onye di nkpa na-aru oru ya. Ugbu a, maapụ isi gị, naanị n'ihu gị ị ga-ahụ uwe mwụda anụnụ anụnụ, nke nwere ụfọdụ echiche ndọta na ya. Eji aka de ya. Lovehụnanya nwere ike ịkwụ ụgwọ ya!
Mpịachi Mkpuchi Anya
Mpịachi Mkpuchi Anya Ejiri ifuru ugo mara mma nke Sonja bu mkpuru osisi site na ifuru ya na okpuru ulo n’oge. Commekota ụdị okike dị iche iche na ihe dị iche iche nke okirikiri na-ahụ maka ihe nkiri na onye na-emepụta ihe mepụtara ihe na-agbanwe agbanwe nwere ike ịchịkwa ya n'ụzọ dị mfe na-enye ọtụtụ anya dị iche iche. Ezubere ngwaahịa a n'ụzọ nwere oghere dị mkpa, na-ewere obere ohere ọ bụla o kwere omume na akpa ebu. A na-eji mpempe akwụkwọ ifuru Oschid mepụta oghere ndị a na-eji laser-cut plexiglass mee, ma jiri okpokoro ọla edo mee ọla edo.
Otutu Ọla Ntị
Otutu Ọla Ntị Nke Daisy bụ okooko osisi ndị mejupụtara ya na ifuru abụọ jikọtara ọnụ n'otu, akụkụ ime na ngalaba mpụta. Ọ na-egosipụta mmekọrịta dị n'etiti mmadụ abụọ na-anọchite anya ezi ịhụnanya ma ọ bụ nkekọ kacha mma. Okike a gwakọtara na ọdịiche nke ifuru daisy na-eme ka onye wewe kpuchie Blue Daisy n'ọtụtụ ụzọ. Nhọrọ nke sapphires na-acha anụnụ anụnụ maka petals bụ iji mesie ike mmụọ nsọ maka olile anya, ọchịchọ na ịhụnanya. Sapphires na-acha odo odo ahọrọla maka ifuru etiti ifuru dị n'etiti onye na-anụ ya ka ọ nwee mmetụta nke ọ joyụ na nganga na-enye onye weghaara udo na ntụkwasị obi zuru oke n'igosipụta ịdị mma ya.
Olu Akwa Silk Foulard Nchịkọta Ọla Dị Iche Iche Uwe Elu Trenchi Mpịachi Mkpuchi Anya Otutu Ọla Ntị